छाेटकरीमाः चन्द्रागिरी आइपिओ बाँडफाँड, लाखाैँ लगानीकर्ता रित्तै
सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बढेर नेपाली सेयरमा नयाँ रेकर्ड बनेपनि बैंकका लगानीकर्ताहरूले घाटा ब्यहाेर्नु परेकाे छ। बिहिबार नेप्से परिसूचक २ हजार ३ सय ७४ दशमलव ६४ अंकमा पुगेर बन्द भएको छ। जुन हाल सम्मकै उच्च हो।
चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडले सर्वसाधारणमा बिक्री गरेको आईपिओ शुक्रबार बिहान बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटको केन्द्रिय कार्यालयमा बाँडफाँड भएको छ
चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडको आइपीओ तपाईंलाई पर्यो की परेन ? अर्थ सरोकार डटकममा हेर्नुहोस् नतिजा...
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से ३१.८७ बिन्दुले उकालो लागेर दुई हजार ३७४.६४ मा पुगेको छ। ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार माापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.५९ ले उकालो लागेर ४४५.५९ मा पुगेको छ।
नेप्सेमा नयाँ रेकर्ड, बजार पूँजीकरण ३२ खर्ब
नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च स्थानमा पुगेकाे छ। २ हजार ३ सय ७४ दशमलव ६४ अंकमा पुगेर बन्द भएकाे आजकाे काराेबारमा बजार उर्लिए पनि धेरै बैंकका सेयर मूल्य घटेका छन्। सीमित केही बाहेक अधिकांश बैंकको सेयर मूल्य घटेको छ। बैंकिङ परिसूचक बिहीबार ३ दशमलव ८३ अंकले घटेको छ।
नेप्से परिसूचक बढ्दा पनि बैंकका लगानीकर्ताले किन गुमाए ?
२४०० को नजिक पुग्यो नेप्से, ३१ अंकको उछाल आउँदा करिब ८ अर्बको किनबेच, २२ कम्पनीको मूल्यमा सर्किट